ओमानविरुद्ध नेपालको प्रदर्शनः ५ ओभरमा ५ विकेट पतन ! (LIVE) - Everest Dainik - News from Nepal
ओमानविरुद्ध नेपालको प्रदर्शनः ५ ओभरमा ५ विकेट पतन ! (LIVE)
टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको नेपालले ५ ओभर नसकिँदै महत्वपूर्ण ५ विकेट गुमाइसकेको छ । नेपालले पाँचौ विकेटका रुपमा सन्दीप जोरालाई शून्य रनमा गुमाएको हो ।
याे पनि पढ्नुस ओमानविरुद्ध संकटमा नेपाल, ६ ओभर सकिँदा ६ विकेट गुम्यो !
यसअघि विनोद भण्डारी ४, इशान पाण्डे २, कप्तान पारस खड्का ५ र दीपेन्द्रसिंह ऐरी १० रनमा आउट भइसकेका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले ५ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर ४४ रन बनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस एसिया कप छनोट : नेपाल भर्सेस ओमान, नेपाल ब्याटिङ गर्दै [LIVE]
याे पनि पढ्नुस टी–२० सिरिजः ओमानविरुद्ध सस्तैमा गुम्यो नेपालको २ विकेट (LIVE)